မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် ဦး နှောက် (၂၀၀၈) - သင့် ဦး နှောက်တွင်порно
dev ဗျာ 2008; 28(1): 62-77 ။ Doi: 10.1016 / j.dr.2007.08.003
BJ Casey,a,* စာရာသည် Getz,a နှင့် Adriana သွပ်ရည်စိမ်b
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်ခုတိုးချဲ့ရည်ရွယ်တဲ့ဒဏ်ရာများနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပွားမှု, အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု, မရည်ရွယ်သောကိုယ်ဝန်နှင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများမြင့်တက်ပေးသော suboptimal ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်လုပ်ရပ်များအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူများအတွက်ရိုးရာ neurobiological နှင့်သိမြင်မှုရှင်းလင်းချက်ကလေးဘဝနဲ့လူကြီးမှဆွေမျိုးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်, စဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိအပြုအမူအတွက် nonlinear အပြောင်းအလဲများကိုများအတွက်အကောင့်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ဒီကာလအတွင်းနေဆဲအတော်လေးနုစဉ်အခါမက်လုံးပေးဖို့မြင့်တုန့်ပြန်အဖြစ်, အပြုအမူတွင်ဤ nonlinear ပြောင်းလဲမှုများကိုအခြေခံသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများတစ်ဇီဝယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်စိတ်ကူးပေးပါသည်။ မကြာသေးမှီကလူ့ပုံရိပ်နှင့်တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများကလေးဘဝနဲ့လူကြီးဖို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဆွေမျိုးကာလအတွင်းအထက်မှအောက်သို့ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကိုမှဆွေမျိုး limbic ဆုလာဘ်စနစ်များ differential ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတအကြံပြုခြင်း, ဒီမြင်ကွင်းကိုများအတွက်ဇီဝအခြေခံသည်။ ဤသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပုံစံဆင်းရဲသောသူတို့သည်ရလဒ်များများအတွက်အန္တရာယ်တိုးမြှင့်, အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေဆီသို့တစ်ဦးဓာတ်ရှိသူများမြီးကောင်ပေါက်များတွင်ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ပါသည်။
keywords: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်, Prefrontal cortex, နျူကလိယ accumbens, Impulse, ဆုကြေး, ဖွံ့ဖြိုးရေး, အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ
ကနျြးမာရေးစာရင်းအင်းများအတွက်အမျိုးသားရေးစင်တာအဆိုအရ, United States မှာဆယ်ကျော်သက်သေဆုံးမှုနှစ်စဉ် 13,000 ကျော်ရှိပါတယ်။ ဤအသေဆုံးမှုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 70% (မော်တော်ယာဉ်ပျက်ကျ, ရည်ရွယ်တဲ့ဒဏ်ရာ, လူသတ်မှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေရာမှဖြစ်ပေါ်Eaton et al ။ , 2006) ။ အဆိုပါ 2005 အမျိုးသားလူငယ်အန္တရာယ်အပြုအမူစစ်တမ်း (YRBS) မှရလဒ်များမြီးကောင်ပေါက်, သောက်သုံးပြီးနောက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ထိုင်ခုံခါးပတ်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်လက်နက်များတင်ဆောင်တရားမဝင်တ္ထုများ အသုံးပြု. နှင့်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံစဉ်များတွင်ပါဝင်အားဖြင့်သေခြင်းတရားသို့မဟုတ်နာမကျန်းသူတို့၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေသည်ဟုအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းကိုပြသ HIV ပိုးကူးစက်မှုကိုအပါအဝင်မရည်ရွယ်သောကိုယ်ဝန်နှင့် STDs, (ထဲမှာရရှိလာတဲ့Eaton et al ။ , 2006) ။ ဤရွေ့ကားစာရင်းဇယားမြီးကောင်ပေါက်အတွက်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုနှင့်လုပ်ရပ်များကိုနားလည်၏အရေးပါမှုကို underscore ။
သိမြင်မှုနှင့်အ neurobiological ယူဆချက်တစ်ခုအရေအတွက်ကိုမြီးကောင်ပေါက် suboptimal ရွေးချယ်မှုအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံအဘယ်ကြောင့်အဘို့အ postulated ပါပြီ။ လူ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်စာပေ၏လတ်တလောပြန်လည်သုံးသပ်ခုနှစ်, Yurgelun-Todd (2007) အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်နှစ်ပေါင်းမှတဆင့်သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးစွမ်းရည်၏အဆငျ့ဆငျ့ သာ. ကြီးမြတ်ထိရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ focal prefrontal ဒေသများအတွင်းတိုးချဲ့လုပ်ဆောင်မှုအားဖြင့်သက်သေအဖြစ်ဤသည်ထိရောက်မှုကို (prefrontal cortex ၏ရငျ့အပေါ်မှီခိုအဖြစ်ဖော်ပြနေသည်ရူဗျောဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ et al ။ , 2000; Tamm, Menon, & Reiss, 2002ဆီလျှော်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်) နှင့်လျော့နည်းသွားလှုပ်ရှားမှု (ဘရောင်း et al ။ , 2005; Durston et al ။ , 2006).
အဆိုပါ prefrontal cortex ၏ရငျ့နှင့်အတူတိုးတက်လာသောသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး၏ဤယေဘုယျပုံစံ, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေလူကြီးဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် linear တိုးအကြံပြုထားသည်။ သို့သျောလညျးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိ suboptimal ရွေးချယ်မှုနှင့်လုပ်ရပ်များဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူနှင့်သေဆုံးမှုအပေါ်ကျန်းမာရေးစာရင်းအင်းများအတွက်အမျိုးသားရေးစင်တာတို့ကသက်သေအဖြစ်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနဲ့လူကြီးကနေခွဲခြားနိုင်ပါတယ်အပြုအမူအတွက် nonlinear ပြောင်းလဲမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်တစ်ဦးနု prefrontal cortex suboptimal ရွေးချယ်မှုအပြုအမူများအတွက်အခြေခံခဲ့ကြသည်လျှင်, သားတို့သည်မိမိတို့လျော့နည်းဖွံ့ဖြိုးပြီး prefrontal cortex နဲ့သိမြင်မှုစွမ်းရည်ပေးထား, ဆယ်ကျော်သက်ထက်သိသိသာသာအလားတူသို့မဟုတ်ပင်ပိုမိုဆိုးရွားမကွညျ့သငျ့သညျ။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးတည်းနု prefrontal function ကို, ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူများအတွက်အကောင့်မပေးနိုငျသညျ။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းသိမြင်မှုနှင့်အ neurobiological ပြောင်းလဲမှုများတစ်ခုတိကျမှန်ကန်စိတ်ကူး (က်ကူးေူပာင်းမြဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလအဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဆကျဆံရပါမည်လှံ, 2000), ထက်အချိန်အတွက်တစ်ခုတည်းလျှပ်တစ်ပြက် (Casey, Tottenham, Liston, & Durston, 2005) ။ တစ်နည်းအားဖြင့်, ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးကာလနားလည်ရန်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏သို့ထွက်အသွင်ကူးပြောင်းမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဤအဆင့်များကွဲပြား attribute တွေကွဲပြားခြားနားသွားဘို့လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ သိမြင်မှုနှင့်အာရုံကြောလုပ်ငန်းစဉ်များအဘို့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာထူထောင်သောဤအကူးအပြောင်း characterizing နှင့်ဤကာလအတွင်းအပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်. အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူအတားအဆီးအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ တစ်သိမြင်မှုသို့မဟုတ်အပြုအမူအဆင့်တွင်, မြီးကောင်ပေါက် (ဆိုလိုသည်မှာသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးချို့တဲ့) ထကြွလွယ်သောနှင့်အန္တရာယ်-ယူပြီးတစ်ဦးချင်းစီ၏ကွဲပြားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာများအတွက်ပြောရလျှင်နှင့်ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ခြင်းမရှိဘဲအသုံးပြုခဲ့သည်ဤဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဝသကဲ့သို့သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။ တစ်ဦး neurobiological အဆင့်တွင်, လူ့ပုံရိပ်နှင့်တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်များဤသီးခြားဆောက်လုပ်ရေးအခြေခံသောအာရုံကြောစနစ်များများအတွက်ကွဲပြား neurobiological အခြေစိုက်စခန်းများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ကျနော်တို့ကြွက်မော်ဒယ်များအပေါ်တည်ဆောက်သောဤမူဘောင် (အတွင်းဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦး neurobiological မော်ဒယ်တီထွင်ခဲ့ကြLaviola, Adriani, Terranova, & Gerra, 1999; လှံ, 2000) နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏မကြာသေးမီပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (Ernst et al ။ , 2005; Galvan, Hare၊ Voss၊ ဂလိုဗာ၊ ၂၀၀၇; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006). သဖန်းသီး။ 1 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဒီ model သရုပ်ဖော်သည်။ အဆိုပါ prefrontal cortex ၏ကျက်ဖို့နီးပါးသီးသန့် related အဖြစ်လက်ဝဲတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့ရိုးရာစရိုက်လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ညာဖက်တွင်အတူတကွထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်ကိုဘယ်လို limbic subcortical နှင့်အထက်မှအောက်သို့ထိန်းချုပ်မှုဒေသများ prefrontal သရုပ်ဖော်သောငါတို့အဆိုပြုထား neurobiological မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကာတွန်း limbic စနစ်များအစောပိုင်းက prefrontal ထိန်းချုပ်မှုဒေသများထက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်အတူဤစနစ်များများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာဖော်ပြသည်။ ဒီ model အရ, တစ်ဦးချင်းစီသည်ဤစနစ်များ (ဆိုလိုသည်မှာ, limbic နှင့် prefrontal) နှစ်ဦးစလုံးတုန်းပဲဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်းအဘယ်သူကိုများအတွက်ကလေးများ, နှိုင်းယှဉ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (prefrontal ထိန်းချုပ်မှုမှ limbic ဆွေမျိုးများ၏ဆိုလိုသည်မှာမညီမမျှ), စဉ်အတွင်း function ရင့်ကျက် limbic ဒေသများအားဖြင့်ပိုပြီး biased လျက်ရှိ၏ ဤစနစ်များကိုအပြည့်အဝရင့်ကျက်ဖြစ်ကြအကြင်အဘို့အရွယ်ရောက်မှနှိုင်းယှဉ်။ ဤသည်ရှုထောင့်ကြောင့်လျော့နည်းရင့်ကျက်အထက်မှအောက်သို့ prefrontal ထိန်းချုပ်မှုဒေသဤ limbic ဆွေမျိုးများ၏အစောပိုင်းရငျ့မှ, ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဖြတ်ပြီးအပြုအမူအတွက် nonlinear ဆိုင်းများအတွက်အခြေခံပေးပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဤဒေသများအကြား functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု (ဤဒေသများထိပ်-Down ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုယန္တရားကိုထောက်ပံ့ပေးHare, Voss, ဂလိုဗာ, & Casey, 2007a) ။ ထို့ပြင်မော်ဒယ်အားဖြင့်လာဘ်လေ့လာရေးအတူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအန္တရာယ်များအပြုအမူ၏ကျန်းမာရေးစာရင်းဇယားများ၏ဆန့်ကျင်သင့်မြတ် Reyna နှင့် Farley (2006) မြီးကောင်ပေါက်သူတို့ထိတွေ့ဆက်ဆံရသောအပြုအမူ၏အန္တရာယ်များကိုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်နားလည်ပေးနိုင်ဖြစ်ကြောင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံပြအရ, စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဓိကအခြေအနေများထဲမှာ, limbic စနစ် prefrontal ထိန်းချုပ်မှုစနစ်က၎င်း၏ရငျ့ကကျြဆွေမျိုးပေးထားထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကိုကျော်အနိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီမော်ဒယ်ကိုထောကျပံ့ဖို့အမူအကျင့်နှင့်လူ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထောက်အထား (ကြိုးများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းအတွက်လုပ်ရပ်များ၏အခြေအနေတွင်ပေးနေကြတယ်သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006, 2007; Hare, Voss, ဂလိုဗာ, & Casey, 2007b; ယုန် et al ။ , 2007a) ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ဦးနှောက်ကဒီလမ်းအတွက်ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်အချို့ဆယ်ကျော်သက် (ဆင်းရဲတဲ့ရေရှည်ရလဒ်များမှဦးဆောင် suboptimal ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချဘို့ သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်အပေါ်သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2007; ယုန် et al ။ , 2007b).
ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူများ၏အစဉ်အလာရှင်းလင်းချက်များကြောင့် prefrontal cortex (က) ၏အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်ဖို့အကြံပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဒယ်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုနှင့်လုပ်ရပ်များ (ခ) တွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ subcortical limbic ဒေသများ (ဥပမာနျူကလိယ accumbens) နှင့်အတူထည့်သွင်းစဉ်းစားထဲသို့ prefrontal cortex ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကြာပါတယ်။
သိမြင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးတစ်ဦးကအုတ်မြစ်အထူးသဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုမက်လုံး (၏ရှေ့မှောက်တွင်အတွက်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထားသောသူတို့၏မျက်နှာသာအတွက်မသင့်လျော်အတွေးများနှင့်လုပ်ရပ်များဖိနှိပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါသည်ကာဇီ, Galvan, & Hare, 2005; ကာဇီ et al ။ , 2000b; ကေးစီ၊ သောမတ်စ်၊ ဒေးဗစ်သား၊ Kunz, & Franzen, 2002a; ကာဇီ, စပါး, Fossella, 2002b) ။ ဂန္ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုအတော်များများဒီစွမ်းရည်ကိုငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (လျှောက်လုံးဖွံ့ဖြိုးကြောင်းပြသကြဖြစ်ရပ်မှန်, 1972; Flavell, Feach, & Chinsky, 1966; Keating & Bobbitt, 1978; Pascual-Leone, 1970) ။ အများအပြားကသဘောတရားပညာရှင်တွေရဲ့သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်တစ်ခုတိုးလာကြောင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အမြန်နှုန်းနှင့်ထိရောက်မှုအတွက်တိုးနှင့်မ (ဥပမာကြောင့်ကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြ Bjorkland, 1985; Bjorkland, 1987; ဖြစ်ရပ်မှန်, 1985) ။ အခွားသောသဘောတရားပညာရှင်တွေရဲ့ (သိမြင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး၎င်းတို့၏အကောင့်တွင် "inhibitory" ဖြစ်စဉ်များ၏ဆောက်လုပ်ရေးပါဝင်သည်ပါပြီHarnishfeger & Bjorkland, 1993) ။ ဒီအကောင့်အဆိုအရနုသိမှတ်ခံစားမှုနှိမ်နင်းရမည့်သတင်းရင်းမြစ် (ဥပမာယှဉ်ပြိုင်ရာမှဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဖို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်, Brainerd & Reyna, 1993; Casey, သောမတ်စ်, Davidson, Kunz, & Franzen, 2002a; Dempster, 1993; စိန်, 1985; Munakata & Yerys, 2001) ။ ထို့ကြောင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူ Impulses သတင်းပို့သို့မဟုတ်ရလဒ်များ၏ optimization များအတွက်ဆန္ဒပြည့်၏နှောင့်နှေး၏ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ပါတယ်နှင့်ဤစွမ်းရည်ကိုငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးရင့်ကျက်ဖို့ပုံပေါ်ပါတယ်။
ကွဲပြားခြားနားသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာနှင့်အတူကွဲပြား Construction အကြံပြုကြောင်း, ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူနီးပါးပြောရလျှင်, ထကြွလွယ်သောနှင့်အန္တရာယ်များအဖြစ်ဖော်ပြထားခဲ့ပြီးသေးသည်ဤဆောက်လုပ်ရေးသိမြင်မှုကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်မှီခိုနေရသည်။ အထူးသဖြင့်စာပေ၏သုံးသပ်ချက် (Impulse ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးအသက်နှင့်အတူမှေးမှိန်ကြောင်းအကြံပြုကာဇီ et al ။ , 2002a; ကာဇီ, သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2005; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2007) နှင့် prefrontal cortex ၏အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာနဲ့ဆက်စပ်နေသည် (ကာဇီ, သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2005), ပေးထားသောတစ်ဦးချင်းမသက်ဆိုင်အသက်, ထကြွလွယ်သောပင်ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်မပေးသောဖို့ဒီဂရီအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ပေမယ့်။
ဆနျ့ကငျြ / သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး impulse ရန်, အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေကလေးဘဝနဲ့လူကြီးဖို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဆွေမျိုးစဉ်အတွင်းတိုးမြှင့်ဖို့ပေါ်လာသည်နှင့်ဆုလာဘ်၏အကဲဖြတ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့လူသိများ subcortical စနစ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းလူ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ, အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုအောင်သည့်အခါ subcortical activation (ဥပမာ accumbens) တွင်တစ်ဦးတိုးအကြံပြု (Kuhnen & Knutson, 2005; Matthews & et al ။ , 2004; Montague & Bern, 2002) ကလေးများနှင့်လူကြီးများမှဆွေမျိုးမြီးကောင်ပေါက်အတွက်ချဲ့ကားပြောဆိုမှုများကြောင်း (Ernst et al ။ , 2005; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထားသောသူတို့၏မျက်နှာသာအတွက်မသင့်လျော်ရွေးချယ်မှုနှင့်လုပ်ရပ်များ၎င်းအား၏စည်းကမ်းချက်များ၌, အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး linear ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသင်တန်းပြသသောစနစ်များကိုထိန်းချုပ်ဆွေမျိုး, ဤစနစ်များအစောပိုင်းကဖှံ့ဖွိုးတိုးအတူ reward- သို့မဟုတ်မက်လုံးပေး-based အပြုအမူများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဘယ်နေရာတွေမှာလဲအကြံပြုအပ်ပါသည်။
လူ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ neuroimaging လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထောက်အထား
ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏မကြာမီကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုအလွယ်တကူလူ့လူဦးရေဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်အတူအသုံးပြုရနိုင်သော neuroimaging နည်းစနစ်များတွင်တိုးတက်မှုအပေါ်အခြေခံထားသည်။ ဤရွေ့ကားနည်းလမ်းများ (တွေ့မြင်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (MRI) နည်းလမ်းတွေအပေါ်အားကိုး သဖန်းသီး။ 2) နှင့်ပါဝင်သည်: အဆောက်အဦများ၏အရွယ်အစားနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသည့်အခြေခံအဆောက်အဦး MRI, ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုပုံစံများကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသည်ဖြစ်သော functional MRI; အဖြူကိစ္စဖိုင်ဘာဝစော၏အညွှန်းကိန်းဆက်သွယ်မှုအသုံးပြုသည်အရာနှင့်ပျံ့နှံ့ tensor ပုံရိပ် (DTI) ။ cortical နှင့် subcortical ဒေသများအကြားယှဉ်ပြိုင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမော်ဒယ်သက်သေအထောက်အထားအသီးသီး DTI နှင့် fMRI ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်နုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်ဆက်သွယ်မှုကထောက်ခံသည်။
လူသားဖွံ့ဖြိုးမှု၏လေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုနဲ့ The အသုံးအများဆုံးသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုနည်းလမ်းများအထက်တွင်ရုပ်ပြနေကြသည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ခန္ဓာဗေဒနှင့် morphometric လေ့လာမှုများအဘို့အအသုံးဝင်သောဦးနှောက် (က) ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေကိုထုတ်လုပ်ရန် (MRI), ပျံ့နှံ့ ...
လူ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ MRI လေ့လာမှုများ
အများအပြားကလေ့လာမှုများ (နေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရှုပုံမှန်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ခန္ဓာဗေဒသင်တန်း map မှဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ MRI ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြ Durston et al ။ , 2001) ။ စုစုပေါင်းဦးနှောက်အရွယ်အစားအသက်အရွယ်ခြောက်လဖြင့်၎င်း၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအရွယ်အစားခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 90% ဖြစ်သော်လည်းဦးနှောက်၏မီးခိုးရောင်ဖြူကိစ္စ subcomponents မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်လျှောက်လုံးပြောင်းလဲနေသောအပြောင်းအလဲများခံယူဖို့ဆက်လက်။ မကြာသေးမီ longitudinal MRI လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ဒေတာများ (အဖြူကိစ္စထက် သာ. ကြီးမြတ်ဒေသဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနှင့်အတူ, မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်တစ်ဦးပြောင်းပြန်လှန်ဦး-ပုံသဏ္ဍာန်ပုံစံရှိတယ်ဆိုတာညွှန်ပြGiedd, 2004; Gogtay et al ။ , 2004; Sowell et al, 2003; Sowell, Thompson က, & Toga, 2004) ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောမော်တာများနှင့်အာရုံခံစနစ်များအဖြစ်မူလတန်း functions များ, subserving ဒေသများ, အစောဆုံးရင့်ကျက်; ဤအမူလတန်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Higher-အလို့ငှာအသင်းအဖွဲ့ဒေသများ, (နောက်ပိုင်းရင့်ကျက်Gogtay et al ။ , 2004; Sowell, Thompson က, & Toga, 2004) ။ ဥပမာအားဖြင့်, MRI-based အစီအမံကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများ cortical မီးခိုးရောင်ကိစ္စအရှုံးမူလတန်း sensorimotor ဒေသများရှိအစောဆုံးတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်နှင့် dorsolateral prefrontal နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ယာယီ cortical (များတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ကြောင်းပြသGogtay et al ။ , 2004) ။ ဒီပုံစံကို (prefrontal cortex ရင့်ကျက်ဖို့နောက်ဆုံးဦးနှောက်ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း nonhuman မျောက်နှင့်လူ့ postmortem လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Bourgeois, Goldman-Rakic, & Rakic, 1994; Huttenlocher, 1979) ။ မီးခိုးရောင်ကိစ္စမှမတူဘဲတစ်အကြမ်းဖျင်း linear ပုံစံထဲမှာအဖြူကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်တိုး, ကောင်းစွာလူကြီးသို့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတလျှောက်လုံးတိုးမြှင့ (Gogtay et al ။ , 2004) ။ ဤပြောင်းလဲမှုများယူဆရအာရုံခံ conduction နှင့်ဆက်သွယ်ရေးတိုးမြှင့် oligodendrocytes အားဖြင့် axon ၏ဖြစ်ပွားနေသော myelination ရောင်ပြန်ဟပ်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာလျော့နည်းအာရုံကို subcortical ဒေသများခံရပြီဖြစ်သော်လည်း, ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဖြတ်ပြီးဦးနှောက်ထဲမှာအကြီးဆုံးအပြောင်းအလဲများကိုအချို့ကိုပါ (Basal ganglia အတွက်အထူးသဖြင့်ဤဒေသများတွင်တွေ့မြင်နေကြSowell et al ။ , 1999တွေ့ သဖန်းသီး။ 3) နှင့်အထူးသဖြင့်အမျိုးသားများအတွက် (Giedd et al ။ , 1996) ။ Basal ganglia နှင့် prefrontal ဒေသများအတွင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ volume ထဲမှာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်သိရဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ (ဥပမာ, dendritic Arbore, ဆဲလ်အသေခံ, Synaptic တံစဉ်များကို, myelination) ၏အလငျး၌စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားဖြစ်စဉ်များ သာ. ကြီးမြတ်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်စေခြင်းငှါဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သင်ယူမှုနှင့်အတူ prefrontal နှင့် subcortical ဒေသများအကြားဆက်သွယ်မှု၏ဒဏ်ငွေ tuning နှင့်ခိုင်မာဘို့ခွင့်ပြုပါ။ ဘယ်လိုကဤဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုသိမြင်အပြောင်းအလဲများကိုဆက်စပ်သလဲ? လေ့လာမှုတစ်ခုအရေအတွက်ကို neuropsychological နှင့်သိမြင်မှုအစီအမံများ (ဥပမာ, ကို အသုံးပြု. တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရငျ့နှင့်သိမြင်မှု function ကို related ပါပြီ Sowell et al ။ , 2003) ။ အထူးသအသင်းအဖွဲ့များ ((MRI-based prefrontal cortical နှင့် Basal ganglia ဒေသဆိုင်ရာ volumes ကိုနှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုအစီအမံများအကြားအခြားများ၏မျက်နှာသာအတွက်တစ်ဦးမသင့်လျော်တုံ့ပြန်မှုပယ်ဖျက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်သက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု attribute ကို၏မျက်နှာသာအတွက်ဆီလျှော်လှုံ့ဆော်မှု attribute ကိုဆီသို့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုနှိမ်နင်းရန်ဆိုလိုသည်မှာနိုင်စွမ်းအစီရင်ခံခဲ့ကြကာဇီ, Trainor et al ။ , 1997) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်သိမြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုအခြေခံအဆောက်အဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများတွင်ထင်ဟပ်နှင့် subcortical (Basal ganglia) ၏အရေးပါမှုအဖြစ် cortical (ဥပမာ prefrontal cortex) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ underscore ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
(ထံမှအစောပိုင်းနှောင်းပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုကျော်အကြီးမြတ်ဆုံးဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုဖေါ်ပြခြင်းဦးနှောက်ဒေသများပုံဥပမာ Sowell et al ။ , 1999).
လူ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ DTI လေ့လာမှုများ
ပြန်လည်သုံးသပ်အဆိုပါ MRI-based morphometry လေ့လာမှုများ cortical ဆက်သွယ်မှု synapses နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှု၏အားကောင်းတစ်ခု overabundance ၏ဖျက်သိမ်းရေးနှင့်အတူဒဏ်ငွေ-ညှိလျက်ရှိသည်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ DTI တူသော MRI နည်းပညာမကြာမီကတိုးတက်လာပိုမိုအသေးစိတ်နှင့်အတူဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတိကျတဲ့အဖြူကိစ္စဝေစာတွေကို၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆန်းစစ်များအတွက်အလားအလာ tool ကိုပေး။ ဤစာတမ်းမှသက်ဆိုင်ရာသိမြင်နိုင်စွမ်းအတွက်တိုးတက်မှုများနှင့်အတူဖိုင်ဘာဝစော၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော neuroimaging လေ့လာမှုများဖြစ်ကြသည်။ အထူးသ, သားသမီးအတွက် prefrontal အဖြူကိစ္စဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ် DTI-based အစီအမံများအကြားအသင်းအဖွဲ့များပြသခဲ့ကြသည်။ တဦးတည်းလေ့လာမှုမှာ, ဒီစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပြုသဘော (prefrontal-parietal ဖိုင်ဘာဝစောဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်Nagy, Westerberg, & Klingberg, 2004) အရွယ်ရောက်မှဆွေမျိုးသားသမီးများတွင်ဤဒေသ differential ကိုစုဆောင်းဖေါ်ပြခြင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်း။
အလားတူချဉ်းကပ်အသုံးပြုခြင်း, Liston et al ။ (2005) ဖိုက်ဘာဝေစာတွေကိုလူကြီးသို့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကိုဖြတ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက်ပေမယ် prefrontal cortex နဲ့ Basal ganglia အကြားသူတို့သာဝစောတဲ့သွားလာရင်း / nogo အပေါ်စွမ်းဆောင်မှုဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြသည် prefrontal-Basal ganglia အကြားအဖြူကိစ္စဝေစာတွေကိုကြောင်းနှင့် -posterior ပြခဲ့ကြ အလုပ်တခုကို။ အဆိုပါ prefrontal ဖိုင်ဘာဝစောတူညီသောတာဝန်သုံးပြီး fMRI လေ့လာမှုမှာဖော်ထုတ်အကျိုးစီးပွားဒေသများအားဖြင့်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ (နှစ်ဦးစလုံးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ DTI လေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီး, ဖိုင်ဘာကျေးရွာအုပ်စုအစီအမံဖှံ့ဖွိုးတိုးတဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ပေမယ့်သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူအထူးသဖြင့်ဖိုက်ဘာဝေစာတွေကို၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်သီးခြားကျေးရွာအုပ်စု dissociating အားဖြင့်ပြသခဲ့ကြသည်Liston et al ။ , 2005) သို့မဟုတ်သိမြင်မှုစွမ်းရည် (နက်ဂျီ et al ။ , 2004) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ဒေသဆိုင်ရာသာမကဆန်းစစ်၏အရေးပါမှုကို underscore, ဒါပေမယ့်သိမြင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အာရုံကြောအလွှာထဲမှာအသက်အရွယ်-မှီခိုအပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်. တောင်းဆိုမှုများအောင်သည့်အခါ circuitry အပြောင်းအလဲများကို related ။
အမူအကျင့်များနှင့်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ functional MRI လေ့လာမှုများ
MRI နှင့် DTI ဖြင့်တိုင်းတာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းအပြုအမူအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ကြပေမယ့်, ဖွဲ့စည်းပုံ-function ကိုအသင်းအဖွဲ့ဆန်းစစ်ဘို့ပိုပြီးတိုက်ရိုက်ချဉ်းကပ် fMRI နှင့်ဝသကဲ့သို့, တစ်ပြိုင်နက်ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူများတွင်အပြောင်းအလဲများတိုင်းတာရန်ဖြစ်ပါသည်။ MRI နှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်ထဲမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုများကိုတိုင်းတာရန်စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံ၏လယ်ပြင်များအတွက်အရေးပါသောအလားအလာရှိပါတယ်။ လက်ရှိစက္ကူဆက်စပ်ခုနှစ်, fMRI ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူ၏အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူအတားအဆီးတစ်ခုနည်းလမ်းများပေးပါသည်။ ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့, prefrontal cortex ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထိုကဲ့သို့သောဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး (အဖြစ်ပိုမိုမြင့်မားသိမြင်မှုစွမ်းရည်များရငျ့အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှယုံကြည်ကာဇီ, စပါး, Fossella 2002b; ကာဇီ, Trainor et al ။ , 1997) ။ အတော်များများက Paradigm Flanker, Stroop နှင့် go / nogo တာဝန်များကို (အပါအဝင်ဤအရည်အချင်းများ၏ neurobiological အခြေခံအကဲဖြတ်ရန်အတူတကွ fMRI အတူအသုံးပြုခဲ့ကြပါပြီကာဇီ, Castellanos et al ။ , 1997; Casey, Giedd, & သောမတ်စ်, 2000a; Durston et al ။ , 2003) ။ စုပေါင်းဤလေ့လာမှုများသည်ဤတာဝန်များကိုဖျော်ဖြေတဲ့အခါမှာကလေးတွေအရွယ်ရောက်လုပ်ပေးထက်ကွဲပြားပေမယ့်မကြာခဏပိုကြီးပိုပျံ့ prefrontal ဒေသများစုဆောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ တိုင်းဒေသကြီးများအသက်အရွယ်နှင့်အတူလှုပ်ရှားမှုအတွက်တာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းလာဆက်နွယ်နေကြောင်းမဟုတ်စဉ် (သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူပတျသကျကြောင်းဆိုလိုသည်မှာ,) တာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်မှဗဟိုဦးနှောက်ဒေသများအတွင်းလှုပ်ရှားမှုများ၏ပုံစံပိုမို focal သို့မဟုတ်အသက်အရွယ်နှင့်အတူဒဏ်ငွေ-ညှိဖြစ်လာသည်။ ဒီပုံစံ (နှစ်ဦးစလုံး Cross-Section ကိုဖြတ်ပြီးလေ့လာတွေ့ရှိထားသည်ဘရောင်း et al ။ , 2005) နှင့် longitudinal လေ့လာမှုများ (Durston et al ။ , 2006) နှင့် Paradigm အမျိုးမျိုးကိုဖြတ်ပြီး။ neuroimaging လေ့လာမှုများနှင့်အဓိပ္ပါယ်ထိုကဲ့သို့သောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို (ဥပမာ dendritic Arbore, Synaptic တံစဉ်များကို) ၏ယန္တရားရဲ့အနှစ်သာရကမနိုင်ပေမယ့်တွေ့ရှိချက်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထင်ဟပ်လျက်, ပရိုဂျက်နှင့်ထံမှ၏သနျ့, ရငျ့နှင့်အတူ activated ဦးနှောက်ဒေသများနှင့်ဤအပြောင်းအလဲများကိုအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးကျော်ပေါ်ပေါက်ကြောင်းအကြံပြု အချိန်ကာလ (ဘရောင်း et al ။ , 2005; Bunge, Dudukovic, Thomason, Vaidya, & Gabrieli, 2002; ကာဇီ, Trainor et al ။ , 1997; ကာဇီ et al ။ , 2002a; Crone, Donohue, Honomichl, Wendelken, & Bunge, 2006; Luna et al ။ , 2001; တဖန်မောရှေအား et al ။ , 2002; Schlaggar et al ။ , 2002; Tamm et al ။ , 2002; သောမတ်စ် et al ။ , 2004; Turkeltaub, Gareau, ပန်း, Zeffiro, & enဒင်, 2003).
ဒီနည်းစနစ်မြီးကောင်ပေါက်အမှန်ပင်လုံလောက်သောသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး (ထကြွလွယ်သော) ချို့တဲ့သို့မဟုတ်မိမိတို့၏ရွေးချယ်မှုနှင့်လုပ်ရပ်များအတွက်အန္တရာယ်များဖြစ်ကြ၏ရှိမရှိအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားနိုင်သလဲ သွားလာရင်း / nogo တာဝန်နဲ့တူသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် Impulse ထိန်းချုပ်မှုအထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦး linear ပုံစံကိုပြသ။ သို့သော်မကြာသေးမီ neuroimaging လေ့လာမှုများ (ဆယ်ကျော်သက်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေမှတိကျတဲ့ဆုလာဘ်-related အပြောင်းအလဲနဲ့ဆနျးစစျဖို့စတင်ပါပြီBjork et al ။ , 2004; Ernst et al ။ , 2005; May et al ။ , 2004) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကထိပ်တန်း-Down ထိန်းချုပ်မှုဒေသများ (prefrontal cortex) နှင့်တကွ, accumbens ၏ဒေသအပေါ်အဓိက Basal ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းပါဝင်ပတ်သက် ganglia ထက်တွဲဖက်၌ဤဒေသ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏စရိုက်လက္ခဏာတွေတစ်ဦးသောအဘို့ကိုအာရုံစူးစိုက်ကြပါပြီ။ တစ်ဦးငွေကြေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းလူကြီးများမှဆွေမျိုးမြီးကောင်ပေါက်အတွက်လျော့နည်း ventral prefrontal လှုပ်ရှားမှု၏မကြာသေးခင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်အစီရင်ခံစာအရအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအမူအကျင့်အပေါ်တာဝန် (ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းEshel, နယ်လ်ဆင်, တိုနီဘလဲ, ထင်း, & Ernst, 2007).
ယေဘုယျအားအနည်းငယ်လေ့လာမှုများ cortical prefrontal ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် တွဲဖက်. (ဥပမာ accumbens) အပြောင်းအလဲများကို subcortical ဒေသများတွင်ဆုလာဘ် circuitry ၏ပုံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ဤအာရုံကြောအပြောင်းအလဲများကိုဆုလာဘ်-ရှာ, Impulse နှင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွေနဲ့အတူတိုက်ဆိုင်ဘယ်လိုအတော်လေးမသိသောနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ neurobiological မော်ဒယ်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ဒေသများရှိဆုလာဘ်များနှင့်ကျက်ဖို့မြင့်တုန့်ပြန်၏ပေါင်းစပ်ဘက်လိုက်မှုမြီးကောင်ပေါက်ဖြစ်ကောင်းအန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူအတွက်၎င်းတို့၏တိုးရှင်းပြ, ချက်ချင်းရှာမယ့်အစားရေရှည်အကျိုးအမြတ်မှစခွေငျးငှါအဆိုတင်သွင်း။ , လူကြီးမှတဆင့် subcortical (ဥပမာ accumbens) နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချကလေးဘဝကိုဖြတ်ပြီး၏ cortical (ဥပမာ prefrontal) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာခြေရာခံမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အစီရင်ခံအပြောင်းအလဲများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဤကာလမှတိကျသောဖြစ်ကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်တဖြည်းဖြည်းတစ်ဦးအတွက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းရငျ့ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းရှိမရှိပေါ်တွင်နောက်ထပ်သတ်ပေးသည် ငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေလူကြီးဖို့အတန်ငယ် linear ပုံစံ။
မကြာသေးခင်က fMRI လေ့လာမှုကနေလက်တွေ့သက်သေအထောက်အထားကျွန်တော်တို့ရဲ့ neurobiological မော်ဒယ်ကိုထောကျပံ့ဖို့ကူညီပေးသည်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မတိုင်မီမှစသောအပြောင်းအလဲဆန်းစစ်နှင့်အောက်ပါတို့ကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုနားလည်ရန်ကူးေူပာင်းမြဆိုင်ရာချဉ်းကပ်ကြာပါတယ်။ (ဒီလေ့လာမှုမှာသွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006), ကျနော်တို့ (တိရိစ္ဆာန်အတွက်ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုနှင့်အပြုအမူများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဦးနှောက်ဒေသများအာရုံစိုက်, ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဖြတ်ပြီးထိန်းသိမ်းရေးဆုချဖို့အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုလေ့လာHikosaka & Watanabe, 2000; Pecina, Cagniard, Berridge, Aldridge, & Zhuang, 2003; Schultz, 2006) နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (ဥပမာ, Knutson, အဒမ်, Fong, & Hommer, 2001; အိုဒိုဟာဆီ, Kringelbach, Rolls, Hornak, Andrews က, 2001; Zald et al ။ , 2004) နှင့်စွဲလမ်း၏လေ့လာမှုများအတွက် (Hyman & Malenka, 2001; Volkow & Li, 2004) ။ ကြွက်မော်ဒယ်များ (အပျေါအခွခေံLaviola et al ။ , 1999; လှံ, 2000) နှင့်ယခင်ပုံရိပ်အလုပ် (Ernst et al ။ , 2005), ကျနော်တို့ကလေးများနှင့်လူကြီးများမှဆွေမျိုး, မြီးကောင်ပေါက်အထက်မှအောက်သို့ prefrontal ထိန်းချုပ်မှုဒေသလျော့နည်းရင့်ကျက်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲအတွက် accumbens ၏ပုံကြီးချဲ့ activation ပြမယ်လို့တွေးဆ။ မကြာသေးမှီကအလုပ်များ, လူကြီးများဤ prefrontal နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဆွေမျိုးအတွက် limbic subcortical ဒေသများအကြား functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုနှောင့်နှေး (ဤဒေသများထိပ်-Down ထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်းများအတွက်ယန္တရားကိုထောက်ပံ့ပေးယုန် et al ။ , 2007a).
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် (ကြွက်မော်ဒယ်များနှင့်အတူတသမတ်တည်းခဲ့ကြသည်Laviola, Macri, Morley-Fletcher, & Adriani, 2003) နှင့်ယခင်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (Ernst et al ။ , 2005) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဆုလာဘ်မှတိုးမြှင့် accumbens လှုပ်ရှားမှုအကြံပြုခြင်း။ အမှန်စင်စစ်ကလေးများနှင့်လူကြီးများမှဆွေမျိုး, မြီးကောင်ပေါက်ဆုလာဘ်များမျှော်လင့်တစ်ခုပုံကြီးချဲ့ accumbens တုံ့ပြန်မှုပြသခဲ့သည်။ သို့သော်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်နှစ်ဦးစလုံးလူကြီးများထက် prefrontal ထိန်းချုပ်မှုဒေသများအတွက်လျော့နည်းရင့်ကျက်တုံ့ပြန်မှုပြသခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် (ကြည့်ရှုသည်ဤဒေသများများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲအလှည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး၏ဤကာလအတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိတိုးမြှင့ထကြွလွယ်သောနှင့်အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေဆက်စပ်ရသောကလေးများသို့မဟုတ်လူကြီးများမှဆွေမျိုး, accumbens လှုပ်ရှားမှုအတွင်းတိုးမြှင့်အခြေခံစခွေငျးငှါအကြံပြု သဖန်းသီး။ 4).
နျူကလီးယပ် accumbens (က) တွင်ဆုလာဘ်ရလဒ်ကို၏မျှော်လင့်ခြင်းနှင့် Orbital တိုကျရိုကျ cortex (ခ) တွင်လှုပ်ရှားမှု Localization ။ ဤအဒေသများတွင်လှုပ်ရှားမှုအတိုင်းအတာအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖှံ့ဖွိုးတိုးဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းဘာသာရပ်များအတွက်, အသက်အရွယ်တစ် function ကိုအဖြစ်ကြံစည်နေသည် ...
prefrontal နှင့် subcortical ဒေသ differential စုဆောင်းမှုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ fMRI လေ့လာမှုအတော်များများဖြတ်ပြီးသတင်းပို့ခဲ့ပြီး (ကာဇီ et al ။ , 2002b; ဘုန်းတော်ကြီး et al ။ , 2003; သောမတ်စ် et al ။ , 2004) ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဤသူတွေ့ရှိချက်နု prefrontal ဒေသများထက် prefrontal နှင့် subcortical ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအကြားတစ်ဦးမညီမမျှ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အနက်ပါပြီ။ (ကွဲပြားခြားနားသောအခင်းအကျင်းအတွက်သင့်လျော်တဲ့လုပ်ရပ်တွေလမ်းညွှန်အတွက် prefrontal ဒေသသက်သေအထောက်အထားပေးထားMiller က & Cohen ကို, 2001) နု prefrontal လှုပ်ရှားမှုအနာဂတ်ရလဒ်များနှင့်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှု၏အကဲဖြတ်၏သင့်လျော်သောခန့်မှန်းချက်သည်ဆီးတားခြင်းငှါ, နှင့်အရှင် accumbens ထက်ဆုလာဘ်အဘိုးပြတ်အပေါ်လျော့နည်းသြဇာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုရေရှည်အကျိုးအမြတ်ကျော်ချက်ချင်းအားဖြင့် biased အခါဒီပုံစံ (cortical လှုပ်ရှားမှုမှဆွေမျိုး, မြင့်မားသော subcortical ဖေါ်ပြခြင်းယခင်သုတေသနနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်McClure, Laibson, Loewenstein, & Cohen, 2004) ။ ထို့ပြင် accumbens လှုပ်ရှားမှု (အပြုသဘောနောက်ဆက်တွဲအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွေနဲ့အတူပတျသကျဖို့ fMRI နှင့်အတူပြသထားသည်Kuhnen & Knutson, 2005) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းကလေးဘဝသို့မဟုတ်လူကြီးမှဆွေမျိုး, နု ventral prefrontal cortex prefrontal စနစ်များလျော့နည်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့, စေ့စ့စပ်စပ် activated ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ဒေသများ (ဥပမာ accumbens) ၏လုံလောက်သောအထက်မှအောက်သို့ထိန်းချုပ်မှုမပေးစေခြင်းငှါ (orbitofrontal cortex) ဆုလာဘ်အတွက် accumbens မှဆွေမျိုး အဘိုးပြတ်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုမကြာခဏအပျိုဖော်ဝင်နှင့်အတူပူးတွဲဖြစ်ပေါ်ကလေးဘဝနဲ့လူကြီးအကြား်ကူးေူပာင်းမြဆိုင်ရာကာလဖြစ်ပါတယ်။ အပျိုဖော်ဝင် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျ့၏စခြေတစ်လှမ်းGraber & Brooks-Gunn, 1998) နှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအမှတ်အသားများအားဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်ဦး nebulous ontogenetic အချိန်သင်တန်းနှင့်အတူလူကြီးသို့တိုးတက်သောအကူးအပြောင်းအဖွစျဖျောပွနိုငျ (လှံ, 2000) ။ Evolutionarily စကားပြော, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လွတ်လပ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုမိသားစုများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကနေခွဲခြာအပေါ်သို့အောင်မြင်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ဝယ်ယူထားတဲ့အတွက်ကာလဖြစ်ပါသည်, သော်လည်းအန္တရာယ်ခွအေနမြေား (ဥပမာ, ဒဏ်ရာ, စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်စွဲ (အဘို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်Kelley, Schochet, & Landry, 2004) ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့-ရှာကြံအပြုအမူတွေထိုကဲ့သို့သောအသစ်အဆန်း-ရှာခြင်းနှင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွေအတွက် peer-ညွှန်ကြားလူမှုရေး interaction ကနှင့်ပြင်းထန်မှုအတွက်တိုးအဖြစ်မျိုးစိတ်အနှံ့ပျံ့နှံ့နေသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များအန္တရာယ်များအပြုအမူများအတွက်ဆယ်ကျော်သက် propensity impact ။ သို့သော်အန္တရာယ်အပြုအမူ (နု "Self-စည်းမျဉ်းအရည်အချင်းကို" နှင့် တွဲဖက်. တိုးလာ novelty- နှင့်အာရုံခံစားမှု-ရှာကြံအကြားဇီဝမောင်းနှင်မညီမမျှ၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်Steinberg, 2004) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ neurobiological ဒေတာဒီနှစ်ခုစနစ်များ (limbic နှင့်ထိန်းချုပ်မှု) ၏ differential ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတဆင့်ဖြစ်ပေါ်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ထင်ကြေးဒီဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပုံစံတစ်ခုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အင်္ဂါရပ်ကြောင်းအကြံပြုလိမ့်မယ်။ သငျသညျဟော်မုန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ထွက်ရှာမြီးကောင်ပေါက်မောင်းအဖြစ်ပဲတစ်ချိန်တည်းမှာအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေရှာတွေ့မှသင့်မိသားစုနှင့်ကျေးရွာစွန့်ခွာရန် High-အန္တရာယ်အပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကလေးငယ်များမိဘများနှင့်အတူနေထိုင်နေနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အသက်တာ၌ဘဏ္ဍာရေးမှီခိုနှင့်ရွေးချယ်အိမ်ထောင်ဖက်ရှိခြင်းနှင့်အတူအသတ်မရှိတိုးချဲ့စေခြင်းငှါလာသောအခါယနေ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ, ဒီဆင့်ကဲမသင့်လျော်ယူဆနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်နှစ်တာကာလအတွင်းကြီးထွားအသစ်အဆန်း-ရှာခြင်းနှင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေဘို့မျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးသက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ အတူတူနေအရွယ်ရွယ်တူချင်းအထဲကဖို့မရှာအပေါင်းတို့နှင့်မိတ်လိုက်ဘို့ဝေးအိမ်ပိုင်နက်ကနေဆယ်ကျော်သက် get ကူညီပေးသောမိဘများနှင့်အတူတိုက်ပွဲဝင်ကြွက်, nonhuman မျောက်ဝံများနှင့်အချို့သောငှက်တို့သည် (အပါအဝင်အခြားမျိုးစိတ်တွင်တွေ့မြင်နေသည်လှံ, 2000) ။ လူကြီးများမှဆွေမျိုး, periadolescent ကြွက် (ကအခမဲ့ရွေးချယ်မှုအသစ်အဆန်းပါရာဒိုင်းအတွက်တိုးမြှင့်အသစ်အဆန်း-ရှာကြံအပြုအမူတွေပြသLaviola et al ။ , 1999) ။ Neurochemical သက်သေအထောက်အထား cortical နှင့် subcortical dopamine စနစ်များအကြားဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ထဲမှာချိန်ခွင်လျှာ, (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း သာ. ကြီးမြတ် cortical dopamine အဆင့်ဆင့်ဆီသို့ပြောင်းရွှေ့ဖို့စတင်ကြောင်းညွှန်ပြလှံ, 2000) ။ လူကြီးသို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကတဆင့်အလားတူအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး dopaminergic enervation (အဖြစ်ကောင်းစွာ nonhuman မျောက် prefrontal cortex မှာပြထားပြီးRosenberg က & Lewis က, 1995) ။ ထို့ကြောင့်ဤအမွငျ့မားသောသရုပ်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေမျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးဖြစ်ပုံနှင့်အရေးကြီးသောသပ္ပါယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။
ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်ဆည်းပူးနေအန္တရာယ်များအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု (အချို့အကြိမ်စိတ်ပညာအတွက်အသိအမှတ်ပြုထားသည်Benthin, Slovic, & Severson, 1993) ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, လူမှုရေးသိမြင်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာစာပေတွင်ဤအရည်အချင်းများအစီရင်ခံတစ်ဦးချင်းခြားနားချက်များ၏ဂန္ထဝင်ဥပမာတစျခု (ဆန္ဒပြည့်၏နှောင့်နှေးဖြစ်ပါသည်Mischel, Shoda, & Rodriguez, 1989) ။ ဆန္ဒပြည့်၏နှောင့်နှေးပုံမှန်အား3နှစ်အရွယ်ထောက်ကလေးအရွယ်တုန်းကမှ 4- အတွက်အကဲဖြတ်သည်။ အဆိုပါကလေးငယ်သူတို့တစ်တွေသေးငယ်တဲ့ဆုလာဘ် (တဦးတည်း cookie ကို) သို့မဟုတ်ကြီးမားသောဆုလာဘ် (နှစ်ခု cookies များကို) ကြိုက်တတ်တဲ့လားဟုမေးမြန်းသည်။ ကလေးသူငယ်အခထို့နောက်စမ်းသပ်မယ့်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရန်အတွက်အခန်းတစ်ခန်းချန်ထားမည်ကြောင်းပြောသည်နှင့်သူမ၏ထိုင်ခုံ၌တည်ကာ cookie ကိုမစားလျှင်သူမကကြီးမားသောအကျိုးကိုခံရလတံ့သောကလေးကရှင်းပြသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးသူငယ်အခမမဟုတ်သလိုသို့မဟုတ်မစောင့်နိုင်, သူမစမ်းသပ်ခေါ်သောနှင့်အားဖြင့်သေးငယ်တဲ့အကျိုးကိုခံရဖို့ခေါင်းလောင်းမြည်သင့်ပါတယ်။ အကယ်. ကလေးသည်တာဝန်နားလည်ရှင်းပါတယ်ပြီးတာနဲ့သူမနှစ်ဦးသည်ဆုလာဘ်နှင့်ခေါင်းလောင်းနှင့်အတူစားပွဲ၌ထိုင်သည်။ အခန်းထဲမှာအာရုံပြံ့လှငျ့မျှကစားစရာ, စာအုပ်တွေသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများနှင့်အတူလျော့ချနေကြသည်။ စမ်းသပ် 15 မိပြီးနောက်သို့မဟုတ်ကလေး, အခေါင်းလောင်းတဘက်တချက်ကတော့ဆုလာဘ်စား, သို့မဟုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲမဆိုနိမိတ်လက္ခဏာများပြသပြီးပြန်လည်ရောက်ရှိ။ (1) ဖြစ်စေသူတို့တစ်ဦးတည်းသာ get ကိုဆိုလိုသည်သော cookie ကိုရှိသည်နိုင်ရန်အတွက်နီးပါးချက်ချင်းခေါင်းလောင်းမြည်; Mischel ကလေးများပုံမှန်အားဖြင့်နည်းလမ်းနှစ်ခုထဲကတစ်ခုအတွက်ပြုမူကြောင်းပြသ သို့မဟုတ် (2) သူတို့စောင့်ပိုကောင်းအောင်သူတို့ရဲ့အကျိုးအမြတ်များနှင့်နှစ်ဦးစလုံး cookies များကိုလက်ခံရရှိသည်။ ဤသည်လေ့လာရေး (အချို့တစ်ဦးချင်းစီအလွန်အမင်းအဓိကမက်လုံး၏မျက်နှာနှင့်ဤဘက်လိုက်မှုအတွက် Impulses သတင်းပို့ထိန်းချုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အတွက်အခြားသူများထက်ပိုကောင်းများမှာအစောပိုင်းကလေးဘဝအတွက်တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်အကြံပြုMischel et al ။ , 1989) နှင့်သူတို့ (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်လူကြီးတစ်လျှောက်လုံးဆက်လက်ပေါ်လာEigsti et al ။ , 2006).
အဘယ်အရာကိုအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်အပြုအမူများတွင်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်ကိုရှင်းပြစျနိုငျသလဲ တချို့ကသဘောတရားပညာရှင်တွေရဲ့ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့်ပတ်သက်နေ dopaminergic mesolimbic circuitry, အန္တရာယ်များအပြုအမူအခြေခံကြောင်း postulated ပါပြီ။ ထိုကဲ့သို့သော subcortical ဒေသများတွင်လည်းအနည်းငယ်သို့မဟုတ်လွန်း dopamine အတွက်ရရှိလာတဲ့ dopamine-related ဗီဇအတွက် allelic မျိုးကွဲ, အတိုင်းဤ circuitry အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု, (အန္တရာယ်များအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ propensity ဆက်စပ်စေခြင်းငှါ,O'Doherty, 2004) ။ အဆိုပါနျူကလိယ accumbens (ချက်ချင်းကြိုတင်ငွေကြေး-အန္တရာယ် Paradigm အပေါ်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုအောင်ဖို့လှုပ်ရှားမှုအတွင်းတိုးမြှင့်ပြသခဲ့ပြီးKuhnen & Knutson, 2005; Matthews က et al ။ , 2004; Montague & Bern, 2002) နှင့်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့, မြီးကောင်ပေါက် (ကလေးများသို့မဟုတ်လူကြီးများမှဆွေမျိုးရလဒ်များဆုချီးမှပုံကြီးချဲ့ accumbens လှုပ်ရှားမှုပြသErnst et al ။ , 2005; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006) ။ စုပေါင်းအဲဒီဒေတာ (ဆယ်ကျော်သက်အုပ်စုတစုအဖြစ်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုပိုမိုကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုဥယျာဉ်မှူး & Steinberg, 2005), ဒါပေမယ့်တချို့ဆယ်ကျော်သက်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များအဘို့အလားအလာ သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်မှာသူတို့ကိုချပြီး, အခြားသူများအန္တရာယ်များအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထက်ပိုမိုကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလူဦးရေအတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်သောရှုပ်ထွေးသောဦးနှောက်-အပြုအမူဆက်ဆံရေးကိုဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာတစ်ဦးချင်းစီအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်။
အန္တရာယ်-ယူပြီးအပြုအမူအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုစူးစမ်းဖို့, သွပ်ရည်စိမ် et al ။ (2007) မကြာသေးမီကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့် Impulse ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရိုအတိုင်းအတာနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ငွေကြေးဆုလာဘ်အတွက်မျှော်ဆုလာဘ်-related အာရုံကြော circuitry အတွက်လှုပ်ရှားမှုအကြားအသင်းအဖွဲ့ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်နှင့်အန္တရာယ်များအပြုအမူအမည်မသိ Self-အစီရင်ခံစာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အကြေးခွံ functional, အန္တရာယ်အမြင်နှင့် Impulse7နှင့် 29 နှစ်ပေါင်း၏အသက်အရွယ်အကြားတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။ accumbens လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဖြတ်ပြီးအန္တရာယ်များအပြုအမူအတွက်ပါဝငျများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ဤသည်လှုပ်ရှားမှုထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူများ၏မျှော်လင့်အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များ၏တစ်ဦးချင်းစီ '' ratings တစ် function ကိုအဖြစ်ကွဲပြား။ ဆိုးရွားအကျိုးဆက်များမှဦးဆောင်အဖြစ်အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေကိုရိပ်မိသူများသည်တစ်ဦးချင်းစီ, ဆုချဖို့ accumbens လျော့နည်း activated ။ ဤသည်အသင်းလူကြီးများဖြစ်နိုင်သောကဲ့သို့သောအပြုအမူ၏အကျိုးဆက်များ rating အတူအမြိုးသားအနေဖြင့်အကြီးအကျယ်မောင်းနှင်ခဲ့သည်။ Impulse ratings မဟုတ်ဘဲအသက်အရွယ်နှင့်အတူ accumbens လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် (တွေ့မြင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းအချို့သောတစ်ဦးချင်းစီမဟုတ်ဘဲ Impulse အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့အပြောင်းအလဲများကိုဖို့ထက်အန္တရာယ်များအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပေးထားသောတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ဓာတ်အတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစသောအပြောင်းအလဲကြောင့်အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြု သဖန်းသီး။ 5).
မြီးကောင်ပေါက်ကလေးများနှင့်လူကြီးများ (က) မှဆွေမျိုးအဆိုပါ accumbens ၏တိုးမြှင်လှုပ်ရှားမှုပြသပါ။ Accumbens လှုပ်ရှားမှုအပြုသဘောအန္တရာယ်များအပြုအမူအတွက်ပါဝငျများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ၏ Self-ratings (ခ) နှင့်ဆက်စပ်ခြင်းနှင့်အပျက်သဘော၏ Self-ratings ဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ် ...
ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူအကြိမ်ကြိမ်ထကြွလွယ်သောနှင့်အန္တရာယ်များအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့ပြီး (Steinberg, 2004, 2007), အပုံရိပ်စာပေသေးဤသုံးသပ်ချက်ကိုကွဲပြားခြားနားသော neurobiological အလွှာနှင့်ဤအပြုအမူများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲအကြံပြုထားသည်။ (အထူးသ Impulse နု ventral prefrontal ဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်နှင့်တဖြည်းဖြည်းလူကြီးဖို့ကလေးဘဝထဲကနေမှေးမှိန်ကာဇီ, သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2005) ။ အားဖြင့်လေ့လာမှုမှာ Impulse ratings နှင့်အသက်အရွယ်အကြားနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှု သွပ်ရည်စိမ် et al ။ (2007) နောက်ထပ်ဒီအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။ ဆနျ့ကငျြ, အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ (accumbens လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတိုးနှင့်ဆက်စပ်သည်Kuhnen & Knutson, 2005; Matthews က et al ။ , 2004; Montague & Bern, 2002), ကြောင်းမြီးကောင်ပေါက်များတွင်ပုံကြီးချဲ့သည်ကလေးများနှင့်လူကြီးများမှဆွေမျိုး (Ernst et al ။ , 2005; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006) ။ ကလေးများထို့နောက် သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ် takers ဖြစ်ဟောကိန်းထုတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းအဖြစ်ထို့ကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်ရွေးချယ်မှုနှင့်အပြုအမူ, Impulse သို့မဟုတ်တစ်ယောက်တည်း prefrontal cortex ၏အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုကြောင့်ကရှင်းပြသည်မရနိုင်ပါ။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်တချို့ဆယ်ကျော်သက်အခြားသူတွေထက် သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအတွက်ကလေးများနှင့်လူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်ကိုမည်သို့များအတွက်အခြေခံများကိုအဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးအာရုံကြောအခြေခံသည်။
စုပေါင်းအဲဒီဒေတာ (အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်ပေမယ့်မြီးကောင်ပေါက်အန္တရာယ် takers ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်ဟုအကြံပြုဥယျာဉ်မှူး & Steinberg, 2005), အချို့သောဆယ်ကျော်သက်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များအဘို့အလားအလာ သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်မှာသူတို့ကိုချပြီး, အခြားသူများအန္တရာယ်များအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထက်ပိုမိုကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလူဦးရေအတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်သောရှုပ်ထွေးသောဦးနှောက်-အပြုအမူဆက်ဆံရေးကိုဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာတစ်ဦးချင်းစီအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲစဉ်းစား၏အရေးပါမှုကို underscore ။ နောက်ထပ်အဲဒီတစ်ဦးချင်းစီနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်, စွဲ-ဆည်းပူးနေအန္တာရာယ်မှအချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အားနည်းချက်ရှင်းပြကူညီလိမ့်မည်။
လူ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (frontostriatal ဒေသများတွင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်အပြောင်းအလဲများပြသGiedd et al ။ , 1996, 1999; Jernigan et al ။ , 1991; Sowell et al ။ , 1999; ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, ကာဇီ, သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2005) (သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့် Self-စည်းမျဉ်းထဲမှာတိုး Parallel ဟန်ကြောင်းကာဇီ, Trainor et al ။ , 1997; Luna & Sweeney, 2004; Luna et al ။ , 2001; ရူဗျောဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ et al ။ , 2000; Steinberg, 2004; ကိုလညျးရှု Steinberg, 2008, ဒီပြဿနာ) ။ ဤအပြောင်းအလဲများ (အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုပြီး focal စုဆောင်းမှုမှပျံ့ထံမှ prefrontal ဒေသ activation အတွက်ပြောင်းကုန်ပြီပြသရန်ပေါ်လာဘရောင်း et al ။ , 2005; Bung et al ။ , 2002; ကာဇီ, Trainor et al ။ , 1997; Durston et al ။ , 2006; တဖန်မောရှေအား et al ။ , 2002) နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း subcortical ဒေသမွငျ့မားစုဆောင်းမှု (ကာဇီ et al ။ , 2002a; Durston et al ။ , 2006; Luna et al ။ , 2001) ။ neuroimaging လေ့လာမှုများနှင့်အဓိပ္ပါယ်ထိုကဲ့သို့သောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို၏ယန္တရားရဲ့အနှစ်သာရကမနိုင်ပေမဲ့, အသံအတိုးအကျယ်နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံတွင်ဤအပြောင်းအလဲများကိုအတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရောင်ပြန်ဟပ်, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူစနစ်၏ဒဏ်ငွေ-tuning ရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များရငျ့နေစဉ်ယင်းဦးနှောက်ဒေသများနှင့်ထံမှပရိုဂျက်၏သနျ့စဖြစ်နိုင်တယ်။
အတူတူယူ, ဒီမှာဖန်တီးတွေ့ရှိချက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်တိုးမြှင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူ subcortical အပျော်အပါးနှင့် cortical ထိန်းချုပ်မှုဒေသများ၏ကွဲပြားခြားနားသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤရွေ့ကားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုဆုလာဘ်စနစ်များလှုပ်ရှားမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအားဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ပါတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဆုလာဘ်-ရှာခြင်းနှင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွေဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာကာလအဖြစ်ခွဲခြားထားပြီးဖြစ်သော်လည်း (ဥယျာဉ်မှူး & Steinberg, 2005; လှံ, 2000) ဆုချမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု, အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များအဘို့ သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်မှာသူတို့ကိုချပြီး, အခြားသူများထက် ပို. အန္တရာယ်များကိုယူအချို့သောဆယ်ကျော်သက် predispose ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုလားသောဆက်ဆံရေးများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအမှတ်အသားများကိုနားလည်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအမူအကျင့်နှင့်ပတ်သက်သောအမျိုးမျိုးသောတွေ့ရှိချက် synthesizing ခြင်းဖြင့်အရေးပါအခြေခံသည်။
ဤလုပ်ငန်းကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု R01 DA18879 နှင့်စိတ်ကျန်းမာရေး 1P50 MH62196 အမျိုးသား Institute ၏အမျိုးသားအင်စတီကျုကနေထောက်ပံ့ငွေအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ထောက်ခံခဲ့သည်။
Benthin တစ်ဦးက, Slovic P ကို, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်အမြင်များ၏ Severson အိပ်ချ်တစ်ဦးက psychometric လေ့လာမှု။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်။ 1993;16: 153-168 ။ [PubMed]
Bjork JM, Knutson B, Fong သည် GW, Caggiano DM, Bennett က SM, Hommer DW ။ မြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာမက်လုံးပေး-ရူးနှမ်းဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်: အလားတူနှင့်လူငယ်လူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2004;24: 1793-1802 ။ [PubMed]
Bjorkland DF ။ သားသမီးရဲ့မှတ်ဉာဏ်အတွက်အဖှဲ့အစညျး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အယူအဆရေးရာအသိပညာ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ခုနှစ်တွင်: Brainerd CJ, Pressley M က, အယ်ဒီတာများ။ မှတ်ဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်များ: သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတသုတေသနအတွက်တိုးတက်မှု။ နယူးယောက်: Springer-Verlag; 1985 ။ စစ။ 103-142 ။
Bjorkland DF ။ စကားပြန်ပြန်လည်သုံးသပ်: အသိပညာအခြေစိုက်စခန်းထဲမှာဘယ်လိုအသက်အရွယ်အပြောင်းအလဲများကိုသားသမီးရဲ့မှတ်ဉာဏ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြု။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 1987;7: 93-130 ။
Bourgeois JP, Goldman-Rakic ​​PS, Rakic ​​P. Synaptogenesis မျောက်တွေကို၏ prefrontal cortex ၌တည်၏။ ဦးနှောက် Cortex ။ 1994;4: 78-96 ။ [PubMed]
Brainerd CJ, Reyna, VF ။ မှတ်ဉာဏ်လွတ်လပ်ရေးနှင့်သိမြင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မှတ်ဉာဏ်ရောက်စွက်ဖက်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 1993;100: 42-67 ။ [PubMed]
ဘရောင်း TT, သည်များ HM, Coalson RS, Miezin FM ရေ, Petersen SE, Schlaggar BL ။ စကားလုံးမျိုးဆက်များအတွက်လူ့ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2005;15: 275-290 ။ [PubMed]
Bung လုပ် SA, Dudukovic မိုင်, Thomason ME, Vaidya CJ, Gabrieli JD ။ ကလေးများအတွက်မှတ်ဥာဏ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နုတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးပံ့ပိုးမှုများကို: fMRI ထံမှအထောက်အထား။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2002;33: 301-311 ။ [PubMed]
တစ်ဦး Neo-Piagetian စွမ်းရည်ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ရပ်မှန် R. အတည်ပြုခြင်း။ စမ်းသပ်ကလေးစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1972;14: 287-302 ။
ဖြစ်ရပ်မှန် R. ဉာဏဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ: လူကြီးမှမွေးဖွားခြင်း။ နယူးယောက်: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 1985 ။
ကာဇီ BJ, Castellanos FX, Giedd ဖြစ်မှု, နားမှာ WL, ဟမ်ဘာဂါ SD, Schubert AB ။ et al ။ တုန့်ပြန်တားစီးနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကို-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ၌တရား frontostriatal circuitry ၏ဆိုလို။ ကလေးအမေရိကန်အကယ်ဒမီနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 1997;36: 374-383 ။ [PubMed]
ကာဇီ BJ, သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare က TA ။ သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းနှောက်အလုပ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအပြောင်းအလဲများ။ Neurobiology အတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်။ 2005;15: 239-244 ။ [PubMed]
ကာဇီ BJ, Giedd ဖြစ်မှု, သောမတ်စ် KM ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်း။ ဇီဝဗေဒစိတ်ပညာ။ 2000a;54: 241-257 ။ [PubMed]
ကာဇီ BJ, သောမတ်စ် KM, Davidson MC, Kunz K ကို Franzen PL ။ တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှု-တုံ့ပြန်မှု Compatibility ကိုတာဝန်နှင့်အတူကြီးထွား striatal နှင့် hippocampal function ကို Dissociating ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2002a;22: 8647-8652 ။ [PubMed]
ကာဇီ BJ, သောမတ်စ် KM, ဝလေ TF, Badgaiyan RD, Eccard CH, Jennings JR, et al ။ တုံ့ပြန်မှုပဋိပက္ခ, အာရုံစူးစိုက်မှုရွေးချယ်ရေးနှင့် functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်နှင့်အတူမျှော်မှန်း၏ Dissociation ။ သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2000b;97: 8728-8733 ။
ကာဇီ BJ, စပါး N ကို, Fossella ဂျေလက်တွေ့, ပုံရိပ်, တွေ့ရှိရပါသည်နှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးတစ်မော်ဒယ်ဆီသို့မျိုးရိုးဗီဇချဉ်းကပ်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Psychobiology ။ 2002b;40: 237-254 ။ [PubMed]
ကာဇီ BJ, စပါး N ကို, Liston ကို C, Durston အက်စ် Imaging ကဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်: ငါတို့သည်သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူကြဘာလဲ? သိမှုသိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2005;9: 104-110 ။
ကာဇီ BJ, Trainor RJ, Orendi JL, Schubert AB, Nystrom LE, Giedd ဖြစ်မှု, et al ။ တစ်ဦးသွားလာရင်း-no-go တာဝန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်စဉ်အတွင်း prefrontal activation ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်တဲ့ MRI လေ့လာမှု။ သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 1997;9: 835-847 ။
Crone အီး, Donohue S က, Honomichl R ကို, Wendelken ကို C, Bung အက်စ်ဦးနှောက်ဒေသများဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအသုံးပြုမှုကိုဖြန်ဖြေ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2006;26: 11239-11247 ။ [PubMed]
Dempster FN ။ အခြေခံအပြောင်းအလဲနဲ့ယန္တရားအတွက် Developmental အပြောင်းအလဲများကို: ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဖို့ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ခုနှစ်တွင်: Howe ML, Pasnak R ကို, အယ်ဒီတာများ။ သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတ Volume ကို 1 အတွက်ထွန်းသစ်စ themes များ: Foundations ။ နယူးယောက်: Springer; 1993 ။ စစ။ 3-27 ။
AB အပေါ်မွေးကင်းစ '' စွမ်းဆောင်မှုများကညွှန်ပြအဖြစ်, action ကိုလမ်းပြပြန်လည်သိမ်းဆည်းသုံးစွဲဖို့နိုင်စွမ်း၏စိန်အေဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး။ 1985;56: 868-883 ။ [PubMed]
Durston S က, et al Davidson MC, သောမတ်စ် KM, Worden က MS, စပါး N ကို, Martinez တစ်ဦး။ ပဋိပက္ခနှင့်လျင်မြန်စွာရောထွေး-ရုံးတင်စစ်ဆေးဖြစ်ရပ်-ဆက်စပ် fMRI သုံးပြီးတုန့်ပြန်ယှဉ်ပြိုင် parametric ကိုင်တွယ်။ Neuroimage ။ 2003;20: 2135-2141 ။ [PubMed]
Durston S က, et al Davidson MC, စပါး N ကို, သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Spicer J ကို, Fossella J ကို။ ဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူ focal cortical လှုပ်ရှားမှုမှပျံ့ထံမှတစ်ဦးကပြောင်းကုန်ပြီ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ 2006;1: 18-20 ။ [PubMed]
Durston S က, Hulshoff Pol သူ, Casey BJ, Giedd ဖြစ်မှု, Buitelaar JK, ဖွံ့ဖြိုးဆဲလူ့ဦးနှောက်၏ဗန် Engeland အိပ်ချ် Anatomical MRI: ငါတို့သည်အဘယ်အရာကိုသင်ယူကြသနည်း ကလေးဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်အကယ်ဒမီဂျာနယ်။ 2001;40: 1012-1020 ။
Eaton LK, Kinchen S က, Ross က J ကို, Hawkins က J ကို, Harris က WA, လောရီ R ကို, et al ။ လူငယ်စွန့်စားမှုအပြုအမူစောင့်ကြည့်-အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, 2005, စောင့်ကြည့်အကျဉ်းချုပ်။ ရောဂါနှင့်သေဆုံးမှုအပတ်စဉ်အစီရင်ခံစာ။ 2006;55: 1-108 ။ [PubMed]
Eigsti ထားတဲ့ IM, Zayas V ကို, Mischel W က, Shoda Y ကို, Ayduk အို Dadlani ကို MB, et al ။ နှောင်းပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်လူကြီးမှမူကြိုကနေသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးခန့်မှန်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ 2006;17: 478-484 ။ [PubMed]
Ernst M က, နယ်လ်ဆင် EE, Jazbec S က, လူယာ eb, ရဟန်းတော် CS, Leibenluft အီး, et al ။ လူကြီးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အကျိုးအမြတ်လက်ခံရရှိခြင်းနှင့်ပျက်ကွက်မှတုံ့ပြန်မှုအတွက် Amygdala နှင့်နျူကလိယ accumbens ။ Neuroimage ။ 2005;25: 1279-1291 ။ [PubMed]
Flavell JH, Feach DR, Chinsky JM ။ အသက်အရွယ်တစ် function ကိုအဖြစ်မှတ်ဉာဏ် task ထဲမှာသဘောဆောင်သောနှုတ်စမ်းလေ့ကျင့်။ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး။ 1966;37: 283-299 ။ [PubMed]
သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare က TA, Parra အီး, Penn J ကို, Voss H ကို, ဂလိုဗာ, G, et al ။ orbitofrontal cortex မှဆွေမျိုးအဆိုပါ accumbens ၏အစောပိုင်းကဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြီးကောင်ပေါက်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူအခြေခံလိမ့်မယ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2006;26: 6885-6892 ။ [PubMed]
သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare T က, Voss H ကို, ဂလိုဗာ, G, Casey BJ ။ စွန့်စားမှု-ဆည်းပူးနေနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်: အန္တရာယ်မှာကားအဘယ်သူနည်း ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ 2007;10: F8-F14 ။ [PubMed]
တစ်ဦးစမ်းသပ်လေ့လာမှု: ဥယျာဉ်မှူးက M, Steinberg အယ်လ်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ, စွန့်စားမှု preference ကိုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအတွက်အောင်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု Peer ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ။ 2005;41: 625-635 ။ [PubMed]
Giedd ဖြစ်မှု။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2004;1021: 77-85 ။ [PubMed]
Giedd ဖြစ်မှု, Blumenthal J ကို, Jeffries NO, Castellanos FX, လျူ H ကို, Zijdenbos တစ်ဦးက, et al ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု: တစ်ဦးက longitudinal MRI လေ့လာမှု။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1999;2: 861-863 ။
Giedd ဖြစ်မှု, Snell JW, Lang N ကို, Rajapakse JC, Casey BJ, Kozuch PL, et al ။ လူ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ quantitative သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်: ခေတ် 4-18 ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 1996;6: 551-560 ။ [PubMed]
Gogtay N ကို, Giedd ဖြစ်မှု, Lusk L ကို, Hayashi KM, Greenstein: D, Vaituzis AC အ, et al ။ အစောပိုင်းလူကြီးတဆင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းလူ့ cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ dynamic မြေပုံ။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2004;101: 8174-8179 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Graber ဂျာ Brooks-ဂွန်ဂျေအပျိုဖော်ဝင်။ ခုနှစ်တွင်: Blechman EA ၏, Brownell KD, အယ်ဒီတာများ။ အမူအကျင့်ဆေးဝါးနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးပြည့်စုံလက်စွဲစာအုပ်။ နယူးယောက်, NY: Guilford စာနယ်ဇင်း; 1998 ။ စစ။ 51-58 ။
ယုန်က TA, Voss Hu, ဂလိုဗာ GH, Casey BJ ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါအဘို့အလားအလာအန္တရာယ်။ 2007a ထုတ်ဝေရန်တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
ယုန်က TA, Voss Hu, ဂလိုဗာ GH, Casey BJ ။ prefrontal နှင့် subcortical limbic စနစ်များအကြားယှဉ်ပြိုင်မှုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းစိတ်ခံစားမှု reactivity ကိုအခြေခံ။ 2007b ထုတ်ဝေရန်တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
Harnishfeger KK, Bjorkland အက်ဖ်တားစီးယန္တရားများ၏ ontogeny: သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးဖို့အသစ်တဖန်ချဉ်းကပ်နည်း။ ခုနှစ်တွင်: Howe ML, Pasnek R ကို, အယ်ဒီတာများ။ သိမြင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ထွန်းသစ်စ themes များ။ vol ။ 1 ။ နယူးယောက်: Springer-Verlag; 1993 ။ စစ။ 28-49 ။
Hikosaka K သည်ကွဲပြားခြားနားသောဆုလာဘ်နှင့်အတူကွဲပြားမျောက်များ၏ Orbital နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် prefrontal အာရုံခံ၏ Watanabe ကအမ်နှောင့်နှေးလှုပ်ရှားမှု။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2000;10: 263-271 ။ [PubMed]
Huttenlocher PR စနစ်။ လူ့တိုကျရိုကျ Cortex-Developmental အပြောင်းအလဲများနှင့်အိုမင်း၏ဆိုးကျိုးများအတွက် Synaptic သိပ်သည်းဆ။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1979;163: 195-205 ။ [PubMed]
Hyman SE, Malenka RC ။ စွဲလမ်းနှင့်ဦးနှောက်: အဆိုပါမလှူ၏ neurobiology နှင့်၎င်း၏ဇွဲ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ Reviews ။ 2001;2: 695-703 ။
Jernigan TL, Zisook S က, Heaton RK, Moranville JT, Hesselink JR, Braff DL ။ schizophrenia အတွက် lenticular အရေးပါနှင့်ဦးနှောက် cortex အတွက်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်မူမမှန်။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်း။ 1991;48: 811-823 ။
Keating DP, Bobbitt BL ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်၏သိမြင်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့အစိတ်အပိုင်းများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု။ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး။ 1978;49: 155-167 ။
ကယ်လီ AE, Schochet T က, Landry C. သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2004;1021: 27-32 ။ [PubMed]
Knutson B ကိုအဒမ် CM, Fong သည် GW, တိုးပွားလာငွေကြေးဆုလာဘ်၏ Hommer ဃရှိလာရွေးချယ်နျူကလိယ accumbens စုဆောင်းလေ့ကျင့်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2001;21: RC159 ။ [PubMed]
Kuhnen CM, Knutson ခဘဏ္ဍာရေးအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ၏အာရုံကြောအခြေခံ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005;47: 763-770 ။ [PubMed]
Laviola, G, Adriani W က, Terranova ML, လူ့ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်တိရစ္ဆာန်အမော်ဒယ်များအတွက် psychostimulants မှအားနည်းချက်များအတွက် Gerra G. အ Psychobiological အန္တရာယ်အချက်များ။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 1999;23: 993-1010 ။ [PubMed]
Laviola, G, Macri S က, Morley-ဖလက်ချာက S, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင် Adriani ဒဗလျူ Abstract အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူ: Psychobiological ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အစောပိုင်းဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2003;27: 19-31 ။ [PubMed]
Liston ကို C, Watts R ကို, စပါး N ကို, Davidson MC, Niogi S က, Ulug လေး, et al ။ Frontostriatal microstructure သိမြင်မှုထိန်းချုပ်အကျိုးရှိစွာစုဆောင်းမှု modulates ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2005;16: 553-560 ။ [PubMed]
Luna B, Thulborn KR, Munoz DP, Merriam EP, Garver Ke, Minshew NJ, et al ။ ကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဝေဦးနှောက် function ကို၏ရင့်ကျက်မှတ်ဉာဏ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ subserves ။ Neuroimage ။ 2001;13: 786-793 ။ [PubMed]
Matthews က SC, et al ။ အန္တရာယ်-ယူပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens ၏ရွေးချယ် activation ။ Neuroreport ။ 2004;15: 2123-2127 ။ [PubMed]
မေလ JC, Delgado MR, Dahl RE, Stenger VA သို့, ရိုင်ယန် ND, Fiez ဂျာ et al ။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက် circuitry ၏အဖြစ်အပျက်-related အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်။ ဟားဗတ်။ 2004;55: 359-366 ။ [PubMed]
လူယာသည် SM, Laibson ပစ, Loewenstein, G, Cohen ကို JD ။ သီးခြားအာရုံကြောစနစ်များကိုချက်ချင်းငွေကြေးဆုလာဘ်ကိုတန်ဖိုးထား။ သိပ္ပံ။ 2004;306: 503-507 ။ [PubMed]
Miller က ek, Cohen ကို JD ။ prefrontal cortex function ကို၏အရေးပါသောသီအိုရီ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏နှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2001;24: 167-202 ။
Mischel W က, Shoda Y ကို, Rodriguez MI ။ ကလေးများအတွက်ဆန္ဒပြည့်၏နှောင့်နှေး။ သိပ္ပံ။ 1989;244: 933-938 ။ [PubMed]
ဘုန်းတော်ကြီး CS, လူယာ eb, နယ်လ်ဆင် EE, Zarahn အီး, Bilder RM, Leibenluft အီး, et al ။ စိတ်ခံစားမှုမျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေအာရုံစိုက်-related ဦးနှောက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကျက်။ Neuroimage ။ 2003;20: 420-428 ။ [PubMed]
ဂူ PR စနစ်, Bern GS ။ အာရုံကြောဘောဂဗေဒနှင့်အဘိုးပြတ်၏ဇီဝအလွှာဟာ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2002;36: 265-284 ။ [PubMed]
မောရှေသည် P ကို, သမင်ဒရယ် K ကို Buxton RB, Wong က EC အ, ဖရန့် LR, သားသမီးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့၏ Stiles ဂျေ Functional MRI ။ Neuroimage ။ 2002;16: 415-424 ။ [PubMed]
Munakata Y ကို, Yerys BE ။ အားလုံးအတူတကွယခု: ဗဟုသုတနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအကြား dissociations ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အခါ။ Pscychological သိပ္ပံ။ 2001;12: 335-337 ။
နက်ဂျီ Z ကို, Westerberg H ကို, အဖြူရောင်အမှု Klingberg တီရင့်ကျက်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းသိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2004;16: 1227-1233 ။ [PubMed]
O'Doherty J ကို, Kringelbach ML, Rolls ET, Hornak J ကို, လူ့ orbitofrontal cortex အတွက် Andrews က C. Abstract ဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်ကိုယ်စားပြုသည်။ သဘာဝတရား neuroscience ။ 2001;4: 95-102 ။ [PubMed]
O'Doherty JP ။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုဆုချ: neuroimaging ထံမှ Insights ။ Neurobiology အတွက်လက်ရှိ Opinions ။ 2004;14: 769-776 ။
Pascual-Leone ဂျေအေ။ Piaget ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအဆင့်အကူးအပြောင်းမှုအတွက်အဖြေသင်္ချာပုံစံ။ Acta Psychologica ။ 1970;32: 301-345 ။
Pecina S က, Cagniard B, Berridge KC, Aldridge JW, Zhuang X တို့မှာ Hyperdopaminergic Mutant ကြွက်ချိုမြိန်ဆုလာဘ်အဘို့အမြင့်မား "လို" ဘဲ "ကဲ့သို့" ရှိသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2003;23: 9395-9402 ။ [PubMed]
Reyna, VF, ဆယ်ကျော်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက် Farley အက်ဖ်အန္တရာယ်နှင့်ကမ္ဘာ၏ကျိုး: သီအိုရီ, အလေ့အကျင့်များနှင့်အများပြည်သူမူဝါဒအကျိုးသက်ရောက်မှု။ ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ 2006;7: 1-44 ။
Rosenberg က DR, Lewis က DA ။ မျောက် prefrontal နှင့်မော်တာ cortical ရဲ့ dopaminergic innervation ၏ Postnatal ရငျ့: တစ်ဦးက tyrosine hydroxylase immunohistochemical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ နှိုင်းယှဉ် Neurology ၏ဂျာနယ်။ 1995;358: 383-400 ။ [PubMed]
ရူဗျောဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ K ကို Overmeyer S က, တေလာအီး, Brammer M က, Williams က SC, Simmons တစ်ဦးက, et al ။ အသက်အရွယ်နှင့်အတူ functional frontalisation: fMRI နှင့်အတူ neurodevelopmental ဘယ်နေရာတွေမှာစီမံလျာထားခြင်း။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2000;24: 13-19 ။ [PubMed]
Schlaggar BL, Brown က TT, သည်များ HM, Visscher KM, Miezin FM ရေ, Petersen SE ။ တစ်ခုတည်းသောစကားများအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်လူကြီးများနှင့်ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများအကြား functional neuroanatomical ကွဲပြားခြားနားမှု။ သိပ္ပံ။ 2002;296: 1476-1479 ။ [PubMed]
Schultz ဒဗလျူအပြုအမူသီအိုရီနှင့်ဆုလာဘ်များ neurophysiology ။ စိတ်ပညာ၏နှစ်ပတ်လည်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2006;57: 87-115 ။
Sowell ER, Peterson BS, Thompson ကလေး, SE, Henkenius AL, Toga AW မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ လူ့သက်တမ်းတစ်လျှောက် cortical ပြောင်းလဲမှုပုံဖော်။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2003;6: 309-315 ။
Sowell ER, Thompson ကလေး, ကေတီဟုမ်း CJ, Jernigan TL, Toga AW ။ တိုကျရိုကျနှင့် striatal ဒေသများတွင် Post-ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ရငျ့အဘို့အ Vivo သက်သေအထောက်အထားအတွက်။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1999;2: 859-861 ။
Sowell ER, Thompson ကလေး, Toga AW ။ အသက်တာ၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးလူ့ cortex အတွက်မြေပုံအပြောင်းအလဲများ။ အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်။ 2004;10: 372-392 ။ [PubMed]
လှံကို LP ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အသက်အရွယ်-related အပြုအမူသရုပ်။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2000;24: 417-463 ။ [PubMed]
Steinberg အယ်လ်အန္တရာယ်-ယူပြီးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်: အဘယျသို့ပြောင်းလဲ, ဘာကွောငျ့လဲ? သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2004;1021: 51-58 ။ [PubMed]
Steinberg အယ်လ်အန္တရာယ်-ယူပြီးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်: ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသိပ္ပံကနေ New ကိုရှုထောင့်။ စိတ်ဓာတ်သိပ္ပံအတွက်လက်ရှိဦးတည်။ 2007;16: 55-59 ။
Tamm L ကို, Menon V ကို, Reiss AL ။ တုန့်ပြန်တားစီးနှင့်အတူဆက်နွယ်ဦးနှောက် function ကို၏ရင့်ကျက်။ ကလေးအမေရိကန်အကယ်ဒမီနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 2002;41: 1231-1238 ။ [PubMed]
သောမတ်စ် KM, Hunt က RH အ, Vizueta N ကို, Sommer T က, Durston S က, ယန် Y ကို, et al ။ သွယ်ဝိုက် sequence ကိုသင်ယူမှုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု၏သက်သေအထောက်အထားများ: ကလေးများနှင့်လူကြီးများ၏ FMRI လေ့လာမှု။ သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2004;16: 1339-1351 ။ [PubMed]
Turkeltaub PE, Gareau L ကို, ပန်းပွင့် DL, Zeffiro က TA ဧဒင် gf ။ စာဖတ်ခြင်းအဘို့အာရုံကြောယန္တရားများ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2003;6: 767-773 ။
Volkow ND လီ TK ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ: ကော်လံကလွဲနေတယ်သွားပြီအပြုအမူများ၏ neurobiology ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ Reviews ။ 2004;5: 963-970 ။
Zald DH, Boileau ငါ el-Dearedy W က, ဂွန် R ကို, McGlone က F, Dichter GS, et al ။ ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်တာဝန်များကိုစဉ်အတွင်းလူ့ striatum အတွက် Dopamine ဂီယာ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2004;24: 4105-4112 ။ [PubMed]